COVID-19: कोरोना महामारी र सामाजिक मीडिया | Martech Zone
मंगलवार, मे 5, 2020 मंगलवार, मे 5, 2020 हार्दिक ओजा
अधिक चीजहरू परिवर्तन हुन्छन्, उनि उस्तै रहन्छ।
जीन ब्याप्टिस्ट अल्फोन्स कर
सामाजिक मिडिया को बारे मा एक राम्रो कुरा: तपाइँ मास्क लगाउन आवश्यक छैन। तपाईं कुनै पनि समय वा सबै समयमा यी COVID-19 हिट समयमा भइरहेको रूपमा केहि पनि टाउको गर्न सक्नुहुन्छ। महामारीले केहि क्षेत्रहरूलाई तीब्र फोकसमा ल्याएको छ, गोलाकार किनारहरू तीक्ष्ण गरिएको छ, खाडाहरूलाई फराकिलो बनाएको छ, र उहि समयमा केही खाली ठाउँहरू पनि कम गरिरहेको छ।
शौचालयहरू जस्तै डाक्टरहरू, प्यारामेडिकहरू, र गरिबहरूलाई खुवाउनेहरूले मुखको मुख पछाडि बन्द गरेर त्यसो गर्छन्। जो महामारीबाट नराम्ररी प्रभावित छन् र कुनै शिक्षा बिना नै उनीहरूले भोकको रोक्नको लागि सुन्न संसारलाई सोशल मिडिया प्रयोग गर्न कुनै उपाय फेला पार्दैन। राम्रोसँग फेड फ्याट्याकटहरूले व्यञ्जनहरू साझा गर्दछन् र सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्दछन् उनीहरू कसरी समय बित्दैछन् भनेर प्रदर्शन गर्न।
सामाजिक मिडिया महामारीको लागि के गर्दैछ?
फेसबुक कथित रूपमा 720,000२०,००० फेसमास्कहरू दान गर्‍यो र स्रोत र अधिक आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्ध छ। यसले स्वास्थ्यकर्मी र साना व्यवसायहरुलाई १$ करोड don० लाख सहयोग गर्ने वाचा गरेको छ।
WhatsApp सिर्जना गरियो कोरोनाभाइरस सूचना हब र डब्ल्यूएचओ लाई एक कुराकानी शुरू गर्न को लागी मानिसहरूलाई कोरोनाभाइरस जोखिमहरु बारे चेतावनी दिन्छ। यो संग कथित रूपमा million 1 मिलियन को प्रतिज्ञा लाई पोयन्टर संस्थानको अन्तर्राष्ट्रिय तथ्य-जाँच नेटवर्क १०० स्थानीय स through्गठनहरू मार्फत countries 45 देशहरूमा रहेको कोरोनाभाइरस तथ्या alliance्क गठबन्धनलाई समर्थन गर्न। त्यहाँ एउटा Whatsapp मा %०% वृद्धि उपयोग।
इन्स्टाग्रामको लागि प्रशंसा गर्न आवश्यक छ प्रसार रोक्नको लागि कदम चाल्दै गलत जानकारीको।
twitter प्रयोगकर्ता बढेको छ २०२० को पहिलो तीन महिनामा करीव २ 23% ले संख्यामा र प्लेटफर्मले ट्वीट्समा प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ जसले कोरोनाभाइरसको प्रसारलाई असर गर्न सक्छ। ट्विटरले $ 2020 मिलियन दान गर्दै छ पत्रकारहरुलाई संरक्षण गर्न समिति र अन्तर्राष्ट्रिय महिला मिडिया फाउन्डेशन.
LinkedIn अनलक १ 16 शिक्षण कोर्सहरू कि प्रयोगकर्ताहरूले नि: शुल्क पहुँच गर्न सक्दछन् र यो व्यवसायको लागि सुझावहरू प्रकाशित गर्दैछ जुन उनीहरूलाई चलिरहेको महामारीको बेलामा के पोष्ट गर्नुपर्दछ।
Netflix ताजा सामग्री आश्वासन दिन्छ लागु गरिएको लकडाउनको बेलामा मनोरन्जन गर्नका लागि।
यूट्यूबले यसको बिट गरिरहेको छ सीमितg विज्ञापन सम्बन्धित कोरोनाभाइरस लाई।
स्प्रिंक्लर संकलित तथ्या .्क त्यो COVID-19 र कोरोनाभाइरस सम्बन्धित सर्तहरू देखाउँदछ सोशल मिडिया, समाचार, र टिभी साइटहरूमा २० मिलियन भन्दा बढी पटक।
सूची संग जान्छ Snapchat, Pinterest, र अन्य सामाजिक मिडिया च्यानलहरू चिप इन गर्दै। यो सबैको लागि राम्रो हो तर महामारीको समयमा मानिसहरू कसरी सोशल मिडिया प्रयोग गरिरहेका छन्?
सामाजिक मिडिया को राम्रो
व्यक्तिहरू घरमा अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्दछ र यसले सामाजिक मिडियामा बढी समय खर्च गर्न अग्रसर गर्दछ। Of०% व्यक्तिले अधिक सामग्री खपत गर्दछन् र% 80% प्रयोगकर्ताहरूले महामारी सम्बन्धित सामग्रीका लागि खोजी गर्दछन्। धन्यबाद, सबैजना मात्र समय बित्दैछन्।
धेरै चिन्तित नागरिकहरूले एक सामाजिक वेब सिर्जना गरेका छन् जसको माध्यमबाट उनीहरूले खाँचोमा परेकालाई घर-पकाएको खाना वितरण गर्छन् र उनीहरूका शहरहरूमा अभाव र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको लागि ठाउँहरू औंल्याउँछन्। उदाहरण को लागी, एक मुम्बई मा आधारित मान्छे को समूह खाना पकाउन र गरीबहरुलाई वितरण गर्न आफ्नो स्रोतहरु को उपयोग गर्न शुरू गर्नुभयो। यो एक हेल्पलाइन र बढि व्यक्तिसँगको शहरमा देखा पर्‍यो जुन अन्य शहरहरूमा गतिविधिमा बढी व्यक्तिहरू थिए।
बिग बास्केटका के गणेश, जेएलएलका जुग्गी मारवाह, र प्रेस्टिज ग्रुपका वेंकट नारायणाले स्टार्टअप शुरू गरे। फिडमीबंगलोर यस Covid19 महामारीको समयमा आर्थिक रूपबाट वञ्चितलाई मद्दत गर्न। तिनीहरूले लगभग 3000००० विपन्न बच्चाहरू र उनीहरूका परिवारका माध्यमबाट खाना प्रदान गर्नेछन् परिक्रमा मानवता फाउंडेशन। तिनीहरूको लक्ष्य लकडाउनको क्रममा lakh लाख खाना सेवा गर्ने हो।
छवि क्रेडिट: JLL
गैर-सरकारी संस्थाहरूले भोजन, सेनिटाइजरहरू, किराना किटहरू, र मास्कहरू प्रदान गर्न यस महामारीको लकडामको समयमा उनीहरूको काम गरिरहेछन्।
सेलिब्रेटीहरू कसरी सुरक्षित र सुरक्षित हुने बारे अनावश्यक सल्लाहको साथ सुझाव दिन्छन्। यो मानिन्छ कि व्यक्ति सल्लाहमा अधिक ग्रहणशील हुन्छन् जब यो सेलिब्रेटीहरु बाट आउँदछ।
यद्यपि त्यहाँ डाउनसाइडहरू पनि छन्।
सामाजिक मिडिया को खराब
जब त्यहाँ व्यापक भोकमरी छ र मानिसहरू भोकले मरेका छन् त्यस्ता सेलिब्रेटीहरू छन् जसले सोशल मिडियाको फाइदा लिन्छन् विदेशी पकाउने व्यंजनहरू उनीहरूले समय बित्ने तरिकाको रूपमा तयार गरिरहेका छन् भनेर देखाउन।
भारतमा मात्र होइन, विश्वभर, विशेष गरी अमेरिका र युरोपमा, मुस्लिमहरूले घृणास्पद पोष्टहरूको अन्त्यमा सम्पूर्ण समुदायलाई महामारीको लागि जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै आएका छन्। नक्कली समाचार र भिडियोका साथै उत्तेजक पोष्टहरू प्रशस्त हुँदैछन्, जुन एउटा अपमानजनक कुरा हो।
राजनैतिक दलहरु घाँस बनाउने कोसिस गर्छन् तर COVID सूर्य चम्किरहेको छ। उनीहरूले भाइरसलाई राजनीतिकरण गर्नुको सट्टा केही अधिक संवेदनशीलता देखाउन सक्दछन्।
सामान्य रूपमा अनियन्त्रितहरूले सोभिड मिडियाको फाइदा लिन्छन् जुन सिभिड १ than भन्दा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। कोहीहरु अवसरको व्यावसायिकरण गर्न चाहन्छन्। अरूले सल्लाह वा समाचार प्रस्ताव गर्दछ जुन भ्रमपूर्ण हुन सक्छ: चिनियाँहरूले जानाजानी संसारलाई सect्क्रमित गर्ने र लिने योजना ..., सिप पानी र गार्गल भाइरसलाई धुउन ..., कच्चा लसुन खान्नुहोस् ..., गोमूत्र र गोबर प्रयोग गर्नुहोस् ..., प्रकाश बत्तीहरू र मैनबत्तीहरू र धूप जलाउने कोरोना हटाउन ... बच्चाहरूले यसलाई समात्न सक्दैन ... र यस्तै। त्यसो भए त्यहाँ कोलोना ट्र्याकिंग अनुप्रयोगहरू प्रदान गर्नेहरू छन् जसमा मालवेयर समावेश छन्।
साम्प्रदायिकताको कुरूप प्रमुखले सोशल मिडियामा उपजाऊ ठाउँ भेट्टायो र कोरोनाभाइरस हराएपछि वा हराए पछि लामो समयसम्म फाटो आउन सक्छ।
मानवीय टचको साथ मार्केटिंग
सोशल मिडियाको सौन्दर्य भनेको यो हो कि तपाईं आफ्नो ब्रान्ड र प्रतिष्ठाको प्रवर्धनमा पूर्ण ध्यान दिन सक्नुहुनेछ र तपाईं यसलाई सामाजिक अन्तरक्रियाको लागि पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। मार्केटिंगले आज यसको गतिविधिमा मानवीय पाटिना थप्नको लागि अलि अलि बदलेको छ।
कम्पनीहरूले अब सामाजिक मिडियाको प्रयोग ग्राहकहरुका लागि चासो देखाउन र कुनै पनि तरिकाले सहयोग गर्न पुग्दछ, केवल उत्पादन सम्बन्धी सहयोग मात्र। यो विश्वास निर्माण गर्न, आत्मविश्वास बढाउने, र सम्बन्ध पोषण गर्ने समय हो। हेरचाह गर्ने कम्पनीहरूले त्यसो गरिरहेछन्। आज सद्भावना कमाउनुहोस्। यो पछि राजस्वमा अनुवाद हुनेछ किनभने मानिसहरूले याद गर्छन्।
डिजिटल मार्केटरहरूले सिधा कुञ्जी शव्दहरू प्रयोग गरे। अब उनीहरूले COVID-19 सम्बन्धित सर्तहरूमा जोड र लक्ष्यहरूमा फरक पार्ने प्रभाव सिर्जना गर्न जोडका साथ कुञ्जीशब्दहरू पुन: अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। एक पनि ब्रान्डवाच लाई दिमागमा राख्नु पर्छ कि कोरोना भाइरस सम्बन्धी पोष्ट वरपरको भावना मुख्यत: नकारात्मक छ।
को बारे मा एक उल्लेखनीय कुरा सामाजिक मिडिया मा महामारी प्रभाव के त्यो यूट्यूब, फेसबुक, र ट्वीटर सूचना प्रजातान्त्रिक गर्न र विषाक्त पोष्टहरू डिटोक्सिफाइ गर्न काम गरिरहेका छन्।
व्यापक परिप्रेक्ष्यमा, एक व्यक्तिले भन्न सक्दछ कि जसले राम्रो गर्न सोशल मिडिया प्रयोग गरिरहेछ उसले त्यसो गर्छ र जसले सामाजिक मिडियालाई दुर्व्यवहारको लागि प्रयोग गर्ने झुकाव राख्छ उसले त्यसो गर्दछ। महामारीले सामाजिक मिडियामा थोरै परिवर्तन गरेको छ तर, तिनीहरू भन्छन्, जति धेरै चीजहरू परिवर्तन हुन्छन, उनि उस्तै उस्तै रहन्छ। हामी अबदेखि months महिनासम्म जान्ने छौं।
टैग: कोविड - १।वास्तवमा जाँचलेजुग्गी मारवाहाK गणेशnetflixमहामारीप्रतिष्ठा समूहसामाजिक मिडिया खराबसामाजिक मिडिया राम्रोtwitterWhatsAppYouTube
हार्दिक ओजा an बर्ष भन्दा बढिको अनुभवको साथ एक एसईओ व्यवसायी हुन्। उसले कम्पनीहरूलाई उनीहरूको व्यवसाय बढाउन मद्दत गर्दछ। उनले SEMrush, खोज इञ्जिन मान्छे, र सोशल मीडिया टुडे जस्तै थप प्रकाशनहरूमा आफ्ना विचारहरू साझा गर्छन्। ट्विटरमा उहाँलाई पछ्याउनुहोस् @Ozaemotion।